Ninkii dugsiga sare ku dhacay ee maalqabeenka noqday - Aayaha
Home/ARIMAHA BULSHADA/Ninkii dugsiga sare ku dhacay ee maalqabeenka noqday
Ninkii dugsiga sare ku dhacay ee maalqabeenka noqday
Barnaamijka todobaad laha ah ee The Boss ee BBC-da kabaxa ayaa soo bandhiga taariikhda hoggaamiyeyaal kala duwan oo ganacsiga heer ka gaaray.
Todobaadkan waxaa marti inoo ahaa Robin Hutson, oo ah aas aasaha iyo madaxa fulinta ee ganacsiga hoteellada UK ee Grown Hotels.
Waxaa laga yaabaa in nolosha Robin Hutson ay ka hoosayn lahayd heerka uu maanta joogo haddii aanu ku dhici lahayn imtixaannadii Iskuulka.
” Waxaan ku dhacay dhammaan maadooyinkaygii dugsiga sare, mana ii suurto galin inaan jaamacad ku biiro” ayuu yiri ninkas 62 jirka ah. “sidaas darteed waxaan isku dayey in aan raadiyo wax kale oo aan ka shaqeeyo”
“Barigii aan 16 jirka ahaa ma aanan xiisayn jirin haasaawaha hablaha, hooyadayna waxay oran jirtay, waliigaa waxaad jeclayd inaad madbakha dhex meeraysato”.
Si ay u daahfuraan hoteelkii ugu horreeyey ee du Vin, Robin iyo xaaskiisa Judy waxa ay rahaamad u dhigeen gurigoodii.
Waxa ay wiilkeeda kula talisay in uu iska diiwaan galiyo koorsada lagu barto shaqada hoteellada, arrintaas oo kor u qaadday xiisaha uu u qabay xirfadda cunto karinta, marti soorka iyo soo dhawaynta.
1994-tii ayuu aas aasay hoteelka caanka ah ee du Vin, wuxuuna 10 sano kadib noqday multi-millionaire, kadib markii asaga iyo ninkii ay bahwadaagta ahaayeen ay sharikaddii isaga iibiyeen lacag gaaraysa £66m.
Wixii ka dambeeyey sanadkii 2011-kii, Robin waxaa uu dhisay koox kale oo hoteella ah, oo lagu magacaabo The Pig.
Haatan waxa uu lix Xarumood oo shaqo ku leeyahay Koonfurta England, waxayna sharikaddiisa oo ku hawlgasha magaca – Home Grown Hotels – usoo xarooda sanadkii lacag gaaraysa £20m.
Markii la arkay xirfadda guulaysatay ee Robin ayaa loo aqoonsaday “ninka ugu saamaynta badan Britain ee dhanka hoteellada”. Waayo loogama baran shaqo xumo.
Markii uu ka qalin jabiyey mac-hadka cunta karinta iyo marti soorka ee Surrey, ee kuyaal Koonfurta London, bartamihii sanadkii 1970, waxa uu ku biiray barnaamijka tababarka iyo maamul wanaagga ee Savoy Group of hotels.
Waxa uu shaqo hoose oo kabalyeeri ah ka bilaabay Hoteelka casriga ah ee Claridge, ee kuyaal London, kahor inta aanu u wareegin oo uusan isla shaqadaas ka bilaabin de Crillon oo kuyaal Paris.
Waxa uu dib ugu laabtay London, asagoo da’diisu ahayd 23 jir, waxa uuna noqday qofkii ugu da’da yaraa ee maamule ka noqda hoteelka Berkeley.
Intaas waxaa u xigtay labo sano oo uu kasoo shaqeeyey hoteelka Bermuda.
Waxa uu dib ugu laabtay UK waxaana loo soo bandhigay in uu noqdo maareeyaha guud ee hoteelka Hampshire asagoo da’ ahaan jiray 28.
Robin waxa uu shaqadaas ka tagay sideed sano kadib, hase ahaatee waxa uu markii ugu horraysay go’aansaday in uu iskiis u shaqaysto.
“Waxaan ahaa 36 jir, waxaan muddo igu filan u shaqaynayey dad kale, sidaas darteed waxaa ka fekeray in aan sidaas ku jiro inta noloshayda ka hartay, iyo inaan isku dayo in aan wax kale qabto”.
Wixii kale waxay noqdeen in uu la wareego hotel magaalada bartankeeda kuyaal, oo uu xoogga saaro iibka cuntada iyo khamriga.
Sidaas darteed 1994-tii waxa ay iskaashadeen saaxiibkiis, Gerard Basset, si ay u daahfuran hoteelka cusub ee du Vin.
Si uu helo lacagtii uu u baahnaa, Robin waxa uu ku guulaystay in uu xaaskiisa Judy ka dhaadhiciyo in ay gurigooda rahaamad ahaan u dhigaan.
Si uu helo lacagtii uu u baahnaa, Robin waxa uu ku guulaystay in uu xaaskiisa Judy ka dhaadhiciyo in gurigooda amaah ahaan u dhigaan.
“Arrintaasi waxay ahayd wixii ugu geesinimada badnaa ee Judy ay waligeed samayso, Eebbe ayaa ku mahadsan”. Ayuu yiri.
Robin iyo Gerard waxay sidoo kale asxaabtooda iyo qoysaskooda ka aruursadeen lacag gaaaraysa £500,000, waxay sidoo kale bangiga kasoo amaahdeen lacag dhan £750,000.
Dhaqaalaha oo ku yaraa awgiis, labada aas aase waxay fuuleen muruqooda.
Si ay macaamiil usoo jiitaan, waxay uu ku dadaaleen in ay waxyaabo cusub, kusoo kordhiyaan hoteelka du Vin sida caano dhay ah iyo qaxwe heer sare ah.
Hoteelkii du Vin waxa uu isu baddalay silsilad hoteello ah, hase ahaatee ayadoo 10 sano ay kasoo wareegtay aas aaskii hoteelkaas, Robin iyo Gerard waxay iska iibiyeen saamiyo dhawr ah kadib markii loo gaaray qiimo aanay diidi Karin.
Robin waxa uu muddo 10 sano ah ahaa maamulaha hoteellada dhawr-ka ee Soho. Sanadkii 2008 waxa uu Hampshire ka aaas aasay hoteel cusub oo casri ah, oo la yiraahdo Lime Wood. Kadib na wuxuu furay hoteelka kale ee The Pig sanadkii 2011-kii.
Robin waxa uu ka walaacsan yahay saamaynta uu yeelan doono ka bixitaanka Midowga Yurub ee Britain, asagoo sheegaya in ay arrintaaasi keeni karto shaqaalo yari iyo in macaamiishu ay yaraadaan.
3 Waxyaabood oo aad u sameyn doonto qofka haddii aad si dhab ah u jeceshahay
Qaladaadka Haweenka Ay Ku Sameeyaan Guurkooda (Laba Qalad Oo Halis Ah)
Shah Rukh Khan oo si layaab leh uga jawaabay su’aal la weeydiiyay
4 SHAY OO NAAG KASTA AY U BAAHANTAHAY DA’ WALBO HA JIRTO [ISKA BARO]
Nin huradada ka toosay isagoo ay ka go’antahay xubinta taranka (Sheeko Yaab Leh)
Ragga Oo Aad U Jecel Una Ooya Haweenka Leh Calaamadahaan (Gabaryahay Ma Leedahay?)
3 Arrimood Oo Kaa Caawinaya In Howsha Sariirta Aad Waqti Dheer Wado
Haddii aad sameysid waxyaabahan isbedel ayaad ka dareemi doontaa caafimaadkaaga
Ragga gaaban oo ku wanaagsan Ciyaarta Sariirta
Taking more than a glass of sugary drinks trigger digestive disorder, study reveals